Magaaladu waxa ay dhaqan gelinaysaa xadidaadyo waraabinta cawska ah oo kinsi-dhaban ah si wax looga qabto abaarta jirta - City of Minneapolis
Magaaladu waxa ay dhaqan gelinaysaa xadidaadyo waraabinta cawska ah oo kinsi-dhaban ah si wax looga qabto abaarta jirta
Laga bilaabo bisha Luulyo 21 keeda, Magaaladda Minneapolis (City of Minneapolis) waxa ay dhaqan gelinaysaa xadidaadyo waraabinta cawska iyo dhirta ah ilaa amar dambe laga soo saarayo. Magaalddu hadda waxaa lagu daray deegaanada digniinta abaarta ka jirto sida ku qeexan Qorshaha Wax Ka Qabadka Abaarta ee Waaxda Khayraadka Dabiiciga ah ee Minnesota.
Wabiga Mississippi (Mississippi River) ayaa si joogta u siinayey Magaaladda Minneapolis (City of Minneapolis) biyaha la cabo muddo ka badan 150 sanno. Magaalddu waxa ay ka balan qaadaa dadweynaha inay leedahay awood ay ku sii wado inay u soo saarto biyo tiro ahaan ku filan, tayo ahaana fiican dadka degan magaalada iyo macmilada jimladaba. Magaalooyinka kale ee nawaaxgan iyana waxa ay leeyihiin nidaamyo kuwan oo kale ah oo u degsan. Xadidaadaha rusheynta waxaa loo sameeyey inay caawiyaan yareynta isticmaalka biyaha ee Wabiga Mississippi (Mississippi River) xilligan iminka ee abaartu jirto.
Rusheynta cawska lama ogola laga bilaabo duhurkii ilaa iyo 6 maqribnimo maalin walba.
Bisha maalmaha dhabanka ah (tusaale ahaan: Luulyo 26 ama Ags.18), guryaha dhanka dhabanka ah ee wadada ku yaal (tusaale ahaan: 1238 Oak St. ama 2574 Cedar Ave.) waa la rushayn karaa cawskooda ka hor ama dib 6 da maqribnimo waqtiyada ah.
Bisha maalmaha kinsiga ah (tusaale ahaan: Luulyo 27 ama Ogs. 19), guryaha dhanka kinsiga ah ee wadada ku yaal (tusaale: 1247 Maple St. ama 2561 18th Ave.) waa la rusheyn karaa cawskooda.
Dhirta yar iyo ubaxa waa lagu waraabin karaa tuubo gacanta lagu hayo hadii loo baahdo.
Khudrada la beerto iyo cawys gacmeedka (labada asbuuc ee ugu horeeysa kolka dhulka la dhigo) waa la waraabin karaa maalintii la rabo xilliga saacadaha galinka dambe ah ee la mamnuucay waraabinta ee duhurkii ilaa iyo 6 maqribnimo.
Geedaha waa lagu waraabin karaa tuubo biyo ka dhibcayaan, baaldi ama bacda waraabinta geedaha hadii loo baahdo.
Talooyin ku saabsan tashiilida biyaha
Waraabi dhirta xilliga ugu qabow ee maalintii si aad isaga ilaaliso uumi-bax.
Waraabi cawska kaliya kolka uu u baahan yahay in la waraabiyo. Cawysaska intooda badani kaliya waxa ay u baahan yihiin hal ingi (inch) oo biyo asbuucii.
Ku rakib madaxyo rusheeyeyaal ah oo dililiqoodu uu hooseeyo iyo dabayl siiyeyaal qasabadaha.
Qaado qubays kooban adigoo isticmaalaya tuubooyin qubays oo madax hoose leh intii aad biyaha dhex geli lahayd.
Xir biyaha inta aad xiiranayso ama aad cadayanayso.
Geli saxuunta suxuun dhaqaha adigoon biyo raacin
Isticmaal saxuun dhaqaha kolka uu buuxo uun.
Buuxi godka saxuunta si aad ugu dhaqdo saxuunta gacanta intii aad u ogolaan lahayd inay biyahu iska socdaan.
Isticmaal bir daawe weyn si aad u nadiifso khudrada intii aad u ogolaan lahayd inay biyahu iska socdaan.
Kaliya dharka ku dhaq qasaalada marka ay buuxso.
Wax badan ka ogow Sahayda Biyaha Magaaladda & Adeegyada Qaybinta Biyaha.